“Caruurta qaxootiga waa in wax laga baraa galmada” - iftineducation.com
iftineducation.com – Wasiirada arimaha caruurta iyo sinaashaha Åsa Regnér ayaa wareysi ay siisay telefishinka SVT ku sheegtay in caruurta aan la wehlin ee qaxootiga ah loo baahanyahay in wax laga baro arimaha galmada, wada-noolaashaha iyo xuquuqda dumarka. Wasiirada ayaa sheegtay in qaar badan oo ka mid ah wiilasha ka yimaada Afghanistan aysan aqoonin sida loola dhaqmo gabdhaha.
Waxay intaasi ku dartay in wiilashaan ay ka yimaadeen bulsho ay kala soocanyihiin gabdhaha iyo wiilasha. Waxay sheegtay in iskuulada laga doonayo in ay muhiimada siiyaan in wax laga baro caruurta soo galootiga ah galmada. Hadalka wasiirka ayaa imaanaya ka dib markii dhawaan ay soo bexeen in dhalinyaro soo galooti ah oo u badan kuwa ka soo jeeda Afghanistan ay arimo akhlaaq xumo ah kula keceen gabdho Swedish ah, taasoo ay ka midtahay in ay naasaha iyo dabadda ka taabteen.
Maalmahaan ayaa Sweden waxaa ku soo batay dooda ku saabsan in dhalinyarada ka imaanaysa wadamada Muslimka ay u baahanyihiin in la baro xuquuqda dumarka, ka dib dhacdooyinka aan ku soo sheegnay. Dadka qaar ayaa ku doodaya in dabeecada dhalinyaradaan ay salka ku hayso dhaqankooda, halka qaar kale ay leeyihiin arintaas mid u qaas ah ma ahan bulshada Muslimiinta.
Halkaan ka daawo wareysiga wasiirada: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/dalarna/ministern-vi-maste-starka-sexualundervisningen-for-nyanlanda